China Yaskawa spot welding robot MOTOMAN-SP165 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Indawo yokuThengisa iRobhothi Inkcazo:
Inkqubo ye- IMOTOMAN-SP uthotho Yaskawa indawo yokuwelda iirobhothi baxhotyiswe ngenkqubo yeerobhothi eqhubele phambili ukusombulula ngengqiqo iingxaki zesiza semveliso kubathengi. Ukubeka emgangathweni izixhobo, ukuphucula ukusebenza kofakelo, ukusebenza, kunye nolondolozo, ukunciphisa amanyathelo okusebenza kokuseta izixhobo kunye nolondolozo, kunye nokuphucula ukusebenza ngokukuko.
Inkqubo ye- Yaskawa indawo yokuwelda iROTOT MOTOMAN-SP165 yi-multi-function robot ehambelana nemipu encinci kunye nephakathi. YiIi-axis ezi-6 ezimileyo nkqo zamalungu amaninzi chwetheza, ngomthwalo omkhulu we-165Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-2702mm. Kufanelekile ukuba zilawule iikhabhathi ze-YRC1000 kunye nokusetyenziselwa ukuwelda kwindawo kunye nokuhamba.
Iinkcukacha zobugcisa ze Indawo yokuThengisa iRobhothi :
6 165Kg Ubukhulu: 2702mm ± 0.05mm
1760Kg 5.0kVA 125 ° / umzuzwana 115 ° / umzuzwana
125 ° / umzuzwana 182 ° / umzuzwana 175 ° / umzuzwana 265 ° / umzuzwana
Indawo yokuwelda iirobhothi Inqwelo-mafutha-SP165 yenziwe ngomzimba weerobhothi, inkqubo yolawulo lwekhompyuter, ibhokisi yokufundisa kunye nenkqubo ye-welding system. Ngenxa yokuncitshiswa kongenelelo phakathi kwezixhobo zepheripherali kunye neentambo, ukulinganisa kwi-Intanethi kunye nemisebenzi yokufundisa kulula. Uhlobo lwengalo olungenanto kunye neentambo ezakhelweyo zewelding yamabala zinciphisa inani leentambo phakathi kwerobhothi kunye nekhabhathi yolawulo, iphucula ukugcinwa ngelixa ibonelela ngezixhobo ezilula, iqinisekisa uluhlu olusezantsi lokusebenza, olulungele ukumiliselwa koxinano oluphezulu, kunye nokuphucula isantya esiphezulu imisebenzi. Yiba negalelo kwimveliso.
Ukuziqhelanisa neemfuno zomsebenzi weentshukumo eziguqukayo, iirobhothi ze-welding zihlala zikhetha uyilo olusisiseko lweerobhothi ezichaziweyo zeshishini, ezinedigri yenkululeko ngokubanzi: ukujikeleza esinqeni, ukujikeleza kwengalo enkulu, ukujikeleza kwengalo, ukujikeleza esihlahleni, ukujija isihlahla kunye nesihlahla jika. Zimbini iindlela zokuqhuba: i-hydraulic drive kunye ne-drive drive. Phakathi kwabo, i-drive yombane inezibonelelo zokugcinwa okulula, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, isivinini esikhulu, ukuchaneka okuphezulu, kunye nokukhuseleka okuhle, ngoko kusetyenziswa ngokubanzi.
Egqithileyo I-Yaskawa arc welding robot AR2010
Okulandelayo: Yaskawa Spot Welding Robot SP210
I-Robotic Mig Welding
Iseli yeWotting Welding
Umatshini Welding Robotic
Iinkqubo zeWotting Welding
I-Yaskawa palletizing robot MOTOMAN-MPL300Ⅱ
Ukuphathwa kweRobot Gp20hl eyiYaskawa
IYASKAWA MOTOMAN-MPL160Ⅱ irobhothi ebethelelayo
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic,